အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ သောက်ရေခပ်(၂)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအတွက် စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး | Moep1's Blog
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ သောက်ရေခပ်(၂)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအတွက် စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး
(နေပြည်တော် ဇန်န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၀ခုနှစ်)
အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ China National Machinery & Equipment Import & Export Corporationတို့ သောက်ရေခပ်(၂) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အတွက် HSS, EM, Machinery and Servicesများ ၀ယ်ယူခြင်းအတွက် Contract စာချုပ်ချုပ်ဆို လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနားကို ဇန်န၀ါရီ ၂၀ရက် ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်း၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀န်ကြီးဌာန၀န်ကြီးဦးစိုးသာ၊ အမှတ်(၂)လျှပ်စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ခင်မောင်မြင့်၊ ရှေ့နေချုပ်ဦးအေးမောင်၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးများ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ China National Machinery & Equipment Import & Export Corporationမှ Vice President. Mr. Han Gang နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ စီးပွားရေးကောင်စစ်ဝန်Mr.Jin Honggen၊ ရွှေစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
ရှေးဦးစွာ ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားသည်။ ထို့နောက် China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation မှ Vice President. Mr. Han Gang က Contract စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation မှ Vice President. Mr.Han Gang တို့သည် Contractစာချုပ်များကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြပြီး အပြန်အလှန် လဲလှယ်ခဲ့ကြကာ စုပေါင်း မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
This entry was posted on Thursday, January 21st, 2010 at 4:00 pm and is filed under အထွေထွေ (General News), သောက်ရေခပ်(၂) (Thoutyaykhat-2).	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
EP-1 Ministry and Chinese company ink deal to cooperate in Ngawchanhka Hydropower Project implementation	Createafree website or blog at WordPress.com.